အလှကုနျပစ်စညျးအသဈကို မိတျဆကျလိုကျတဲ့ Selena Gomez – SoShwe
Home/Entertainment/အလှကုနျပစ်စညျးအသဈကို မိတျဆကျလိုကျတဲ့ Selena Gomez
အလှကုနျပစ်စညျးအသဈကို မိတျဆကျလိုကျတဲ့ Selena Gomez
So Shwe February 6, 2020	Entertainment Leaveacomment
အနုပညာပါရမီပွညျ့ဝပွီး အလှပဂေးလေးဖွဈတဲ့ Selena Gomez ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလမှာ “Rare” ဆိုတဲ့ သီခငျြးအယျလျဘမျအသဈကို ပရိသတျလကျထဲ ထညျ့ပေးလိုကျတဲ့နကေ့နစေလို့ အနုပညာရှငျမြားနဲ့ သတငျးဆောငျးပါးတှရေဲ့ သတငျးခေါငျးစဉျမှာ Selena Gomez ကပဲ နရောယူထားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
Selena ရဲ့ပရိသတျတှကေတော့ သူမရဲ့အယျလျဘမျတှကေို တဈခဲနကျ ဝယျယူအားပေးခဲ့ကွပွီး ဝဖေနျလကေနျသူတှကေလညျး သီခငျြးတှထေဲမှာပါတဲ့ သီခငျြးစာသားတှဟော Justin Bieber ကို ရညျညှနျးပွီး သီဆိုထားကွောငျး ထငျမွငျခကျြတှပေေးကွပါတယျ။
မကွာသေးခငျမှာပဲ Selena ဟာ သူ့ရဲ့ပရိသတျတှနေဲ့ အလှပရေးရာစိတျဝငျစားသူအားလုံးကို နောကျထပျအကွောငျးအရာတဈခုနဲ့ အံ့အားသငျ့အောငျလုပျလိုကျပွနျပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ ၂၀၂၀ ခုနှဈ အတှငျးမှာပဲ “Rare Beauty” လို့ အမညျပေးထားတဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို Sephora ဆိုငျမှာ စတငျဖွနျ့ခြီရောငျးခမြညျဖွဈကွောငျး၊ Selena Gomez ရဲ့ “Rare Beauty” အလှကုနျပစ်စညျးတှကေို Sephora အလှကုနျပစ်စညျးဆိုငျနဲ့ RareBeauty.com တို့ကနေ တိုကျရိုကျဝယျယူနိုငျကွောငျးကိုလညျး သူမရဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့ကနပွေောပွထားပါတယျ။
“Rare Beauty” အမညျနဲ့ ဖှငျ့ထားတဲ့ အငျစတာဂရမျအကောငျ့ဟာ ယခုခြိနျမှာဆိုရငျတော့ Follower ၁သနျးကြျောရှိနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ “Rare Beauty” အလှကုနျပစ်စညျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဗီဒီယိုလေးတဈခုတငျထားပွီး ပရိသတျတှကေို နမေထိထိုငျမသာဖွဈအောငျ ပွုလုပျခဲ့ပါသေးတယျ။
အလှကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Selena Gomez
အနုပညာပါရမီပြည့်ဝပြီး အလှပဂေးလေးဖြစ်တဲ့ Selena Gomez ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှာ “Rare” ဆိုတဲ့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ်အသစ်ကို ပရိသတ်လက်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့နေ့ကနေစလို့ အနုပညာရှင်များနဲ့ သတင်းဆောင်းပါးတွေရဲ့ သတင်းခေါင်းစဉ်မှာ Selena Gomez ကပဲ နေရာယူထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Selena ရဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ သူမရဲ့အယ်လ်ဘမ်တွေကို တစ်ခဲနက် ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြပြီး ဝေဖန်လေကန်သူတွေကလည်း သီချင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ သီချင်းစာသားတွေဟာ Justin Bieber ကို ရည်ညွှန်းပြီး သီဆိုထားကြောင်း ထင်မြင်ချက်တွေပေးကြပါတယ်။
မကြာသေးခင်မှာပဲ Selena ဟာ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ အလှပရေးရာစိတ်ဝင်စားသူအားလုံးကို နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ အံ့အားသင့်အောင်လုပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွင်းမှာပဲ “Rare Beauty” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို Sephora ဆိုင်မှာ စတင်ဖြန့်ချီရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Selena Gomez ရဲ့ “Rare Beauty” အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို Sephora အလှကုန်ပစ္စည်းဆိုင်နဲ့ RareBeauty.com တို့ကနေ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းကိုလည်း သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်ကနေပြောပြထားပါတယ်။
“Rare Beauty” အမည်နဲ့ ဖွင့်ထားတဲ့ အင်စတာဂရမ်အကောင့်ဟာ ယခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ Follower ၁သန်းကျော်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် “Rare Beauty” အလှကုန်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ထားပြီး ပရိသတ်တွေကို နေမထိထိုင်မသာဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
Source ~ SY(Soshwe)
Previous ?????????????????????? ????????? (???) ????????????????????????????????????????????? ??????????
Next ????-???? ???????????? Online ?? ?????????????????? ???? ??????????????